Kaca oo dhici: Halkan waa sheekada ATN - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Kaca oo dhici: Halkan waa sheekada ATN
Kaca oo dhici: Halkan waa sheekada ATNATN, sanduuqa TV Lughaya, dhagax xiddig ganacsiga ee Malmo ah. Ka dib markii weerar booliska, shirkadda la daalay.
- Waa mid aad u maydhan biyaha, ayaa sheegay in mid ka mid ah saddex nin oo looga shakisan yahay xadgudub ku ah sharciga copyright.
Shantii sano ee la soo dhaafay, ATN faa'iido gaadhaya ku dhawaad 38 million kadib markii waxyaabaha dhaqaale. Shirkadda ayaa sanadihii la soo dhaafay tageen 14-25 shaqaalaha.
- Qalabka oo dhan ayaa la qabtay. xisaabaadka ayaa la xayiray. shaqaalaha waa lacag la'aan, qofna ogyahay sida ay dhammaan doonto, ayaa sheegay in mid ka mid ah saddex tuhmane la xiray ka dib markii weerar booliska.
Sida laga soo xigtay isaga si, xeer hadda ka mas'uul ah mustaqbalka shirkadda waa. Xeer Henrik Rasmusson bartay shalay ay codsigaaga Xeryaha idaha miyaad iska siiyo by maxkamadda degmada. Taas macnaheedu waa in miis wuxuu xaq u leeyahay in ay soo tuurid ah hanti kasta oo ay ka heli karaan shirkadda ilaa cadadka ugu sareeya ee 250 milyan oo karoon. Tirada ay matalaysaa waxa shirkadda ajnabiga TV dalbaday magdhow.
Sida laga soo xigtay Warbixinta Sannadlaha ATN ayaa waxaa jiray at hantida sano dhammaadka 67 million ee shirkadda, inta badan ee hantida maguurtada ah, technology iyo receivables ka macaamiisha.
Hay'adda Fulinta hadda sidoo kale xaq u yeelan doonaan in ay hantida Xayiraadda bilayska - oo ay ku jiraan xisaab iyo milkiilayaasha guryaha ee gaarka loo leeyahay bangiga. Maxaa ku dhacaya mushaharka shaqaalaha cadda.
- Suurtagalnimada shaqaalaha in ay mushaaraadka ka lacagtii shirkadda helo aad u xaddidan tahay u hesho, ayaa sheegay in xeerilaaliyaha Henrik Rasmusson.
- Waxaa jira dhibbanayaal badan, qandaraaslayaasha iyo kuwa ka shaqeeya labadaba. Dawladdu waxay masuul ka tahay sida ay u heli doonaan mushaarkooda. Dadka waa mid aad u niyad. Waxay heli jawaab ma, ayaa sheegay in ninka laga shakisan yahay.
ATN bilaabay howlgallo 2008 oo si degdeg ah u koray. Iyada oo sanduuqa ATN, macaamiisha ay awood u dhexeeya kun channels ay arki karaan oo aan saxan satellite ah doorato. kala duwan ee channels ahayd si wanaagsan oo kun oo macaamiisha ka Iswiidhan oo dhan, iyo xataa ka baxsan xuduudka ee dalka, saxiixay Times.
isbeddelkaas ayaa ugu sarreeya ayaa ATN ee 2013 marka dakhliga ee shirkadda ahaayeen ku dhowaad 60 million oo faa'iido u sheegay ka dib markii waxyaabaha dhaqaale ee 13 million. Warbixinta Sannadlaha ah ee The ATN ee 2013 ayaa sheegay in shirkadda markaas loogu tala galay inay dhaqaale gaadhaya $ 10 million si loo kordhiyo awoodda shabakadda 100 000 dadka isticmaala.
Intii uu socday howlgalkii booliska saaray server ee shirkadda. Waxay ahayd madow ee telefishanka ee macaamiisha oo dhan. Haddaba waad arki kartaa channels qaar ka mid ah mar kale, laakiin ma aha kuwa ugu caansan.
- Waxaan wax halkan ma soo diri kartaa. Waa in shirkadaha in ay yihiin macaamiisheena, kuwaas oo naftooda bilaabay baahinta, ayaa sheegay in mid ka mid ah saddexdii nin ee laga shakiyo.
Siyaasiyiinta kor u taagayba sida ATN sheeko guul
ATN ayaa soo bandhigay sida ay qortay guul by siyaasiyiinta Malmö ah. A dhowr sano ka hor, Wasiirka Ganacsiga on safarada.
Miyuu helay 8.1 milyan oo taageero bilowga cusub
badanaa Shirkadda shaqo muddo dheer shaqo la xaq u leeyahay in magdhow shaqooyin cusub ku bilaabatay, ku dhowaad nus ka mid ah 25 shaqaale oo qayb ka ah mushaarkooda heli tabarruca xafiiska shaqada.
In ka badan shanta sano ee la soo dhaafay, shirkaddu lahaa 8.1 milyan oo shaqo bilowday cusub iyo tallaabooyinka kale ee bulshada.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/uppgang-och-fall-har-ar-historien-om-atn11.11.2016. 20:33	Categories